Tag: 2009 | Martech Zone
Iko shanduko uye meseji muShift Inoitika zvinoshamisa. Ipo ichitaura nekumhanyisa kugamuchirwa kwemagariro midhiya uye tekinoroji, ini ndichiri kunongedza kuti hombe nhamba dzichiri kumiririra zvidiki zvidiki kana zvasvika pakutorwa kwevanhu vakawanda. Mabhizinesi achine nguva yekugadzirisa, kutora uye kuwana mugove wemusika kana vakaita izvozvi. Dzvanya nepositi kana iwe usingaone iyo Shift Inoitika mune yako feed kana email. Handitombowana
Yenhare Yekushambadzira Matanho Ekutanga muna 2009
Svondo, Ndira 4, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Musangano weWebhu 2.0 wakafanotaura Kutsvaga Kushambadzira uye Kushambadzira KweMafoni kwaizove kukuru muna 2009. Ndakanga ndiine kofi neshamwari, Adam Small, neMugovera uye yake Mobile Marketing kambani muno muIndy yakave nekukura kwakakura - kunyanya mukota yekupedzisira. Zvizhinji zvekukura kwake zvave zvichikonzerwa neiyo API yakasimba uye kushanduka kwaakavaka akatenderedza ake ekushambadzira nhare Kuzivikanwa kwevose vari vaviri masvikiro kuri nekuda kwavo
Sunday, January 4, 2009 Sunday, October 4, 2015